Eukaryotic microorganisms nwere akpụkpọ ahụ-agbụ cell organelles na-agụnye dịkwa ka usoro ha na protists, ebe prokaryotic ntule-niile nke ndị microorganisms-na-conventionally nkewa dị ka kọrọ akpụkpọ ahụ-agbụ organelles na-agụnye eubacteria na archaebacteria. Microbiologists omenala dabeere na omenala, staining, na Microscopy. Otú ọ dị, ihe na-erughị 1% nke microorganisms ugbu ke nkịtị gburugburu nwere ike ịbụ cultured na-akpa iche iji ugbu a n'aka.  Microbiologists mgbe ịdabere na molekụla bayoloji ngwaọrụ dị ka DNA usoro dabeere njirimara, atụ 16s rRNA site n'usoro usoro eji maka bacteria njirimara.
Microbiology bụ ịmụ niile ndụ nke na ha dị nnọọ nta na-anya na gba ọtọ anya. Nke a na-agụnye bacteria, archaea, nje, dịkwa ka usoro ha, prions, mmadụ nje na algae, ịgụnye maara dị ka 'ụmụ nje'. Ndị a na ụmụ nje na-egwu isi ọrụ na potassium ndụ, biodegradation / biodeterioration, mgbanwoe, nri spoilage, ihe na-akpata ma na-achịkwa ọrịa, na biotechnology. N'ihi na ha egosipụta ọtụtụ ihe, ụmụ nje nwere ike na-arụ ọrụ na ọtụtụ ụzọ: na-eme ka na-azọpụta ndụ ọgwụ ọjọọ, imewe nke biofuels, nhicha ndu, ma na-amị / nhazi nri na ihe ọṅụṅụ.
Microbiologists amụ ụmụ nje, na ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mkpa nchoputa na underpinned ọha mmadụ rụpụtara nnyocha nke ama ama microbiologists, dị ka Jenner na ya ogwu megide kịtịkpa, Fleming na nchọpụta nke penicillin, Marshall na njirimara nke njikọ n'etiti Helicobacter pylori ọrịa na afo ọnyá, na zọọ Hausen, onye kwuru na njikọ n'etiti papilloma virus na cervical cancer.
Microbiology research kemgbe, na-aga n'ihu na-abụ, Central ka-ezute ọtụtụ nke ugbu a zuru ụwa ọnụ na-achụso na ihe ịma aka, dị ka ịnọgide na-enwe nri, mmiri na ume nche n'ihi na a ike bi na a ibi n'ụwa. Microbiology research ga-aka zaa nnukwu ajụjụ ndị dị ka 'otú iche iche bụ ndụ n'Ụwa?', Na 'adịghị ndụ adị n'ebe ndị ọzọ na Universe'?
Post oge: Dec-04-2018